Izinwele Izesekeli Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Izinwele Izesekeli Factory
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512510
I-Headdress ethengisa kakhulu (i-Cactus two piece set) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe i-hairpin intombazane ethandekayo i-BB clip headdress hair clip sebenzisa isandla - eyenziwe nge-embroidery enezinhlangothi ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512511
Isigqoko esidayisa esishisayo (Crape myrtle two piece set) Intambo efekethisiwe Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip use hand - made three-dimensional embroidery, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512512
Isigqoko sentloko esidayisa okushisayo (Isethi esinezicucu ezimbili ze-Lemon) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB isiqeshana se-hairdress hair clip sebenzisa isandla - senziwe ngoboya obuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512515
I-Headdress ethengisa kakhulu (i-Daisies enezingcezu ezimbili) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip sebenzisa isandla - eyenziwe ngoboya obuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512513
Isigqoko esidayisa esishisayo (Thanda izingcezu ezimbili) Intambo efekethisiwe Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip use hand - made three-dimensional embroidery, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, umkhiqizo olulan.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512516
I-Headdress ethengisa kakhulu (i-Bear two-set set) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe i-hairpin intombazane ethandekayo i-BB clip headdress hair clip sebenzisa isandla - eyenziwe nge-embroidery enezinhlangothi ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512517
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512518
Isigqoko sentloko esidayisa okushisayo (Isethi esinezicucu ezimbili ze-Lemon) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe i-hairpin intombazane ethandekayo BB isiqeshana se-headdress hair clip sebenzisa isandla - senziwe ngoboya obuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512519
Isigqoko esidayisa esishisayo (Thanda izingcezu ezimbili) Intambo efekethisiwe Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip use hand - made three-dimensional embroidery, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512520
Isigqoko sentloko esidayisa hot (Hot air balloon two-piece set) Intambo efekethisiwe Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip use hand - made three-dimensional embroidery, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512521A
I-Hairpin ethengisa kakhulu (i-fishbone blue) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit yabaqalayo efekethisiwe i-hairpin Izesekeli zezinwele ze-Cute Princess zisebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
Iziketi zezinwele zezinwele ezifekethisiwe zesitolo esidayisa yonke impahla 512525
Isigqoko esidayisa esishisayo (Isethi yezinhlamvu ezimbili zezinyoni) Intambo efekethisiwe Diy Embroidery Kit Beginner efekethisiwe hairpin intombazane ethandekayo BB clip headdress hair clip use hand - made 3-dimensional embroidery, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.